Qodaalonline.blogspot.com: Shirqoolkii Birmingham-Qaybtii 2-aad: Cali Cumar Xasan
Hadaba, markii aanu Ingiriiska soo degnay ee aanu bilownay la-halganka la-qabsiga dalkan aanu ku cusubnahay ee aanu iskuulo raadin, shaqo raadin iyo degaan barasho ku jiray, huwantiina (Hollandiiskii iyo Soomaalidii) ma ay nasan ee waxa ay guclo iyo orod ugu jireen, sidii ay ku soo heli lahaayeen meesha aan ka deganahay dalka Ingiriiska! Xidhiidho badan iyo waraysiyo kale oo ay sameeyeen ka dib, waxay soo ogaadeen meesha adarayskayagu yahay. Kaas markii ay hantiyeen-na guluf iyo colaad hor-leh ayay naga soo daba-rareen iyaga oo weliba dad halkan degan-na arintii soo geliyay! Dadkan cusub ee Ingiriiska kaga soo biiray dagaalkan naga dhexeeya qolyahii Holland ee isku haybta ahaa oo rag, dumar iyo dhalin-yaro u badan ayaa curiyay wax lala yaabo oo foolxumo wayn runtii noqotay, oo ay ka muuqato cadaawad gaamurtay oo aad u liidata! Taas oo ah inay qoraan dacwado badan oo aniga iga dhan ah oo ay u gudbiyeen Police-ka halkan (UK) iyo weliba hayado kale oo dawladeed oo Ingiriis ah, iyaga oo eed iiga dhigaya in aan ahay nin khatar ku ah bulshada halkan degan iyo "caruurtooda! "Bal hada aad u dhuux erayadan "ninkani waxa uu khatar ku yahay bulshada iyo caruurtooda!"
Nasiib wanaag, meesha la joogaa ma aha Soomaaliya ama Afrika ee waa UK, oo waxa internet-ka ay ku qorqoraan ee baanta ah iyo dacwadda Police-ka loola tagayaa waa ay kala duwan yihiin. Police-ku warka aad u sheegto waxuu kaa rabaa inaad cadayntiisa keento, taasina waa ay ku fashilmeen. "la soco hada, duulkani marka ay waxan samaynayaan, dalkan Ingiriiska-ba ma aanaan deganahay waqti ka badan bil!
Si kastaba-se ha ahaatee, tacabkoodii maarkuu khasaaray ee uu midho-dhali waayay ee la i-xidhi waayay ama wadanka la iga mastaafurin waayay (sidaas oo ah sida ay jeclaayeen), ayay dhinac kale uga wareegeen oo waxa ay hadana bilaabeen inay meelo kale naga soo hujuumaan oo tusaale ahaan ay magaca wiil aan dhalay gubaan (wax ku xumeeyaan), oo inta ay cuntooyin bisil (take away) si joogto ah ugu dalbaan magaciisa ay adarayskayaga ku soo hagaajiyaan. Dabadeedna, la noo keeno cuntadaas oo lacagteedana lana waydiiyo! Waxa ay sameeyaan oo kale oo marar badan dhacay, inay Police-ka u telefooniyaan oo u sheegaan in gurigayaga rabshado ka jiraan, ama la isku laayay, ama dhib kale laga wado. Taasoo keentay in saqda-dhexe, marar badan uu Police aqalka nagu garaacay oo uu yidhaahdo, dagaal ayaa laga sheegaay gurigiinan ama, qof idinka mid ah ayaa na soo garaacay oo sheegay in la dilay iwm. Kuwaas oo dhamaantood aanay waxba ka jirin ee been abuur ay qoladani waday uun wada ahaa.
Waxa intaas dhinac socda, arimo kale oo iyaga qudhooda ka mid ahaa mushkilado nagu bilaabmay markii aan Ingiriiska soo degnay oo ay ka mid yihiin lacag wiil aan dhalay laba jeer laga dhacay, telefoono sedex ah oo isla ninkaas siyaalo kale duwan looga xaday, kuwan damabe oo aan aaminsanahay inay dhamaantood xidhiidh la leeyihiin isla arimahaas dusha ee ay qoladaas isku haybta ahi wado?
Intaas waxa dheer, mudo sedex sano ah telefoonada qoyskayga waa la dhagaystaa, oo wax kasta oo xidhiidh ah oo aanu aduunka la leenahay nooca uu doono ha noqdee qolyahan aanu is-hayno iyo dadkooda caalamka ku kala filiqsani baraha bulshada ayaa ay iskugu gudbiyaan!
Akhristoow, hadaba su'aashu waxa ay tahay, sidee ayaa ay ugu suurto gashay inay telefoonadayada dhagaystaan? Qoladii Hollandiiska ahayd-de maxay iyaguna ku soo dagaal galeen? maxaanu ka samaynay? jawaabaha waydiimahaa iyo xoggo kaleba, ka akhris qaybta 3aad ee sheekada "Shirqoolkii Birmingham Qaybta 3aad!"
...... La soco qaybta 3aad ee sheekadan yaabka leh insha Allah dhawaan.
F.G; Halkan hoose guji oo ka akhri qaybihii hore ee sheekadan; "Shrqoolkii Birmingham qaybtii 1aad iyo qaybtii hordhaca ahayd."
"Ha jirto J.Somaliland oo Ha joogto waligeed"
Posted by WYL-News at 3:42 PM